MacBook-yada soo socda ee soo socda ayaa laga yaabaa inay lahaadaan booska SD UHS-II iyo ugu badnaan 32 GB oo RAM ah | Waxaan ka socdaa mac
Waxyaabaha MacBookga ee soo socda ayaa laga yaabaa inay muujiyaan booska SD UHS-II iyo illaa 32GB RAM
Wax isku mid ah had iyo jeer way dhacaan. Markay soo dhowaato soo saarista qalab cusub, xanta ku saabsan qeexitaankeeda ayaa isa soo taraysa. In kasta oo ay shirkaddu isku daydo inay tan kaga hortagto ciqaab adag oo sirta ah oo qandaraasyada lala galayo alaab-qeybiyeyaasheeda, wax had iyo jeer "way ka baxsadaan".
Hadda waxaan haynaa xan cusub oo ku saabsan qaar ka mid ah astaamaha farsamada ee soo socda MacBook Pro in Apple ay bilaabi doonto bilo yar gudahood. Waan arki doonaa haddii aakhirka ay run yihiin iyo in kale.
Xan cusub ayaa hadda ka soo ifbaxday deegaanka wararka Apple ee la xiriira astaamaha qaarkood ee moodooyinka soo socda ee MacBook Pro ee ay shirkaddu soo bandhigeyso sannadkan yeelan doonaan. Sida laga soo xigtay YouTuber Luke miani, MacBook Pro cusub wuxuu soo bandhigi doonaa booska kaarka SD-ka oo leh taageero UHS-II xawaaraha iyo badhanka Aqoonsiga Taabashada ayaa iftiimiyay markii ugu horreysay. Waxay kaloo faallo ka bixisay in RAM-keedu ku koobnaan doono 32 GB.
Sawir qaadayaashu way qaddarin doonaan SD UHS-II
In kasta oo wararkii hore ay u muuqdeen kuwa tilmaamaya ku darista booska SD, kani waa kii ugu horreeyay ee hubiya inuu la jaan qaadayo kaararka UHS-II. Iswaafajintaani waxay bixisaa koror muuqda oo xawaare ah, oo gaaraya illaa 312mb / s, marka la barbar dhigo 100mb / s oo leh kaararka dhaqanka ee SD-ka. Naqshadayntu waa mid gadaal laga jaan qaadi karo sidaa darteed waxaad sidoo kale isticmaali kartaa kaararka UHS-I. Shirkado kala duwan ayaa horay u sii daayay kaararka UHS-II SD ee xoogga leh, oo ay ku jiraan SanDisk iyo noocyo kale oo sarsare.
Ku darista UHS-II ee MacBook Pro waxay noqon doontaa casriyayn weyn oo loogu talagalay tifaftirayaasha fiidiyowga iyo sawir qaadayaasha, isticmaalayaasha ugu muhiimsan ee kaararka SD ee kamaradaha. Shaki la'aan, iyaga waa war weyn.
Miani sidoo kale wuxuu sheeganayaa in barnaamijka cusub ee 'MacBook Pro' uu soo bandhigi doono badhan Aqoonsiga Taabashada Iftiimay iyo gadaal gadaal markii ugu horeysay. Faahfaahinta halkan waa xoogaa yar, laakiin xanta ayaa leh in badhanka taabashada Aqoonsiga uu gadaal ka iftiimi doono "LEDs badan."
Ugu dambeyntiina, Miani ayaa soo warisay in MacBook-yada cusub ay ku koobnaan karaan 32 GB ee RAM. Tani waxay ka hor imaaneysaa warbixinnadii hore ee ka soo baxay Bloomberg, oo soo wariyay in MacBook Pros-ka cusub lagu keydin doono ilaa 64GB xasuusta, sidaas darteed sheegashada waa in loola dhaqmaa si xoogaa shaki ah. Mac M1-yada hadda jira waxay ku egyihiin kaliya 16GB oo RAM ah. Waan arki doonaa haddii Miani sax yahay Ono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Waxyaabaha MacBookga ee soo socda ayaa laga yaabaa inay muujiyaan booska SD UHS-II iyo illaa 32GB RAM
Codsiga Google Drive ee la shaqeeya faylasha dalabka wuxuu imaan doonaa Sebtember